I-Acer ConceptD: Uluhlu olutsha lweencwadana zeengcali | Iindaba zeGajethi
Siyaqhubeka neendaba ezivela kwi-Acer kwinkcazo yayo kwi-IFA 2019. Inkampani isishiya nayo Uluhlu lwayo olutsha lweencwadana zeengcali, Oluluhlu lweConceptD. Olu luhlu lutsha luphehlelelwe ngokukodwa abaqulunqi bomxholo, njengoko zonke izixhobo zibonelelwa ngezi modeli. Iimodeli ezinamandla, ezipakishwe ngeempawu zokukunceda wenze umsebenzi.
Olu luhlu luyilelwe ukubonelela ngokusebenza okuphezulu, ukongeza ekuvumeleni iiyure ezinde zokusetyenziswa okungaphazanyiswa. Ngaphandle kwamathandabuzo, inikwa njengoluhlu olufanelekileyo lweengcali. I-Acer isishiya neelaptops ezininzi kunye nokubeka esweni ngaphakathi koluhlu lweConceptD.
Inkampani iyayazi ukubaluleka kokwenza kakuhle kwimisebenzi enje ubunyani bokwenyani, ubukrelekrele bokwenziwa kunye nohlalutyo olukhulu idata. Ngesi sizathu, lonke uluhlu luboniswa njengenye yezona ndlela zibalaseleyo kule ndawo, kuthotho lweemodeli ezintsha, kunye neConceptD 9 Pro ngaphambili njengelaptop yayo ephambili.
1 I-ConceptD 9 Pro: Inkwenkwezi yoluhlu
2 I-ConceptD 7 Pro: Amandla kuyilo olulula
3 I-ConceptD 5 Pro: Zimbini iisayizi ezikhoyo
4 I-ConceptD 3 Pro: Igqibelele kuyilo lomxholo
5 I-ConceptD 5 kunye neConceptD 3: Iimodeli ezihlaziyiweyo
6 Ukuqwalaselwa kweConceptD-CM2241W
7 Ixabiso kunye nokuqaliswa
Ingqondo D. 9 Pro: Inkwenkwezi yoluhlu
Imodeli yeenkwenkwezi kolu luhlu lusuka kwi-Acer yiConceptD 9 Pro.Sizifumana sinelaptop enobuchule kunye nefanelekileyo kubaqulunqi, enkosi kubukho be-Ezel Aero hinge eyenziwe ngomatshini nge-CNC, eyilwe luphawu uqobo. Kuya kufuneka songeze ukuba iza ne Ubungakanani besikrini esingu-17,3-intshi ngesisombululo se-4K (3840 x 2160), eya kuthi ikwazi ukujika, yandise kwaye ihlale phantsi ngamaxesha onke. Ukongeza, lo mboniso yiPANTONE eqinisekisiweyo kwaye igubungela i-100% yemibala ye-Adobe RGB ngombala nge-Delta E <1 yokuchaneka kombala.
Le ConceptD 9 Pro yeelaptop ineeprosesa I-Intel Core i9 ukuya kuthi ga kwi-9th kunye nemizobo ukuya kwi-NVIDIA Quadro RTX 5000. Yigrafu eyenzelwe ukuba kufundwe nzulu nge-AI okanye ukulinganisa kobunjineli kunye ne studio ezinkulu zoopopayi. Ukugqibelela kwabo basebenzisi abafuna amandla kunye nokuhambelana komnqamlezo. Incwadana iza nesitayile seWacom EMR esincamathelayo ngokulula kwimagnethi kuyo.
I-ConceptD 7 Pro: Amandla kuyilo olulula
Imodeli yesibini kolu luhlu luvela kwi-Acer yiConceptD 7 Pro.Yilaptop eboniswa njengemodeli enamandla, eguqukayo, kodwa ikhanya kakhulu ngaxeshanye. Ke ilungile xa isiza kuthi siyithwale ngalo lonke ixesha. I-17,9mm ubukhulu kwaye inobunzima be-2.1kg.
Laptop ine-15,6-intshi, 4.000-pixel screen. Yenzelwe ukusebenza ngamandla ekuhambeni kwaye ikwayinxalenye yenkqubo yeRTX Studio. Inikwe amandla yiprosesa ye-Intel Core i7 yesizukulwane se-9 kwaye iza ne-NVIDIA Quadro RTX 5000 GPU. Ukongeza, i-ConceptD Palette ibonelela nge-interface yomsebenzisi enomdla ekhawulezisa uhlengahlengiso lweeprofayili zombala kunye nolawulo lwenkqubo yokujonga.
I-ConceptD 5 Pro: Zimbini iisayizi ezikhoyo
Le laptop ikwayinxalenye yenkqubo ye-RTX Studio, njengoko iqinisekisiwe ngu-Acer uqobo kwinkcazo-ntetho yayo. Inikwe njengenketho efanelekileyo xa usenza uyilo oluntsonkothileyo lweCAD, oopopayi kunye nomsebenzi wokulinganisa. Kungenxa yoko le nto iyimodeli elungileyo yoyilo, iizandi ze-3D, abavelisi beziphumo ezizodwa okanye izitudiyo zoyilo.
I-ConceptD 5 Pro isungulwe ngobukhulu bobabini, njenge Iimpawu ze-15,6 okanye i-17,3-intshi ye-IPSi, Zombini ngesisombululo se-4K UHD. Ikwasebenzisa ukuya kuthi ga kwi-7th isizukulwane seprosesa se-Intel Core i9 kunye neQuadro RTX 3000 yemizobo.Yenzelwe nge-chassis yentsimbi yeprimiyamu, ebonelela ngokuzinza. Umboniso wayo oqinisekisiweyo we-PANTONE unikezelwe kubazobi, obonisa umbala obanzi ohambelana ne-100% yendawo yombala ye-RGB ye-Adobe yokuphindaphinda umbala ngokuchanekileyo.
I-ConceptD 3 Pro: Igqibelele kuyilo lomxholo
Le laptop yeyona ndawo ifikelelekayo kolu luhlu, njengoko utshilo u-Acer kwinkcazo-ntetho yakhe. Yimodeli efanelekileyo yabathwebuli beefoto, abafundi bokuyila imizi-mveliso, abayili bemizobo okanye abayili bangaphakathi. Kwakhona ukuhambisa amaqonga anjengeYouTube okanye iTwitch inokuba yimodeli elungileyo kule ndlela. Ngamafutshane, ilungele abenzi bemxholo.
Ngokumalunga nokucaciswa kwayo, into ebonakalisiweyo luphawu kukuba isebenzisa iprosesa ye-Intel Core i7 ukuya kuthi ga kwisizukulwana se-9 kunye nemizobo yeNVIDIA Quadro T1000. Ime ngaphandle kwayo yonke into kuba isebenza cwaka ngaphantsi kwe-40 dB. Eyilelwe ukusetyenziswa ngokulula ekuhambeni, abasebenzisi banokungena ngaphakathi ngokudityaniswa kweminwe yokufunda ngeWindows Hello ukufikelela ngokulula nangokukhuselekileyo ngalo naliphi na ixesha naphi na.
I-ConceptD 5 kunye neConceptD 3: Iimodeli ezihlaziyiweyo
I-Acer ivuselela iilaptops ezimbini kolu luhlu, Efumana uthotho loyilo kunye nokuphuculwa kweenkcukacha. Ibrand isishiya neelaptops ezimbini ezintsha zeConceptD 5 kunye neConceptD 3. Iindlela ezimbini onokukhetha kuzo kwabo bafuna ukhetho oluqhelekileyo ngaphakathi kolu luhlu, kodwa ngaphandle kokuncama umgangatho wabo.
I-ConceptD 5 isungulwe ngobukhulu bobabini, Izikrini ze-intshi ezingama-15 okanye ezili-17 intshi. Zombini iilaptops zisebenzisa i-7th yesizukulwane se-Intel Core i9 processors. Ngelixa i-ConceptD 5 ihlaziyiwe ngeendlela ze-NVIDIA GeForce GTX 2060 GPU.Ngakolunye uhlangothi, i-ConceptD 3 yincwadana encinci yokubhala kunye nenhle ngenxa yokugqiba kwayo okumhlophe, kunye nokusebenza ngaphandle kwengxolo ukuze abasebenzisi bakwazi ukugxila kuyilo lwabo. Kwimeko yakhe, usebenzisa i-NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU, ebonelela ngamandla amakhulu.
Okokugqibela, inkampani isishiya nesibek 'esweni ngaphakathi kolu luhlu. Yindlela entsha yeConceptD CM2241W, Esisitrato sedesktop enesitayile efanelekileyo kubasebenzisi abafuna ukongeza umboniso wangaphandle kwindawo yabo yokusebenza. Ke sifumana isikrini esikhulu, esenza umsebenzi wethu ubelula.
Isuphavayiza ine-bezel encinci, ekuvumela ukuba usebenzise ngokucacileyo ngaphambili kwayo ngalo lonke ixesha. Ukongeza, ime ngokuchaneka kombala ogqwesileyo ixhasa i-99% yebala le-Adobe RGB. Ke ilungele abaqulunqi kunye nabayili bemxholo.
Olu luhlu lolona lubanzi luboniswe yi-Acer kwi-IFA 2019. Sifumana iimodeli ezininzi, ezinye zazo nokuba zinenguqulelo ezininzi ngokobungakanani. Zonke ziya kuphehlelelwa kwezi nyanga zokugqibela zonyaka, phakathi kuka-Okthobha ukuya kuDisemba. Nangona ubukho buya kwahluka ngokuxhomekeke kwimodeli. Le yimihla yabo yokukhutshwa kunye namaxabiso:
I-ConceptD 9 Pro iya kufumaneka ukusuka ngo-Novemba ngexabiso le-5.499 euros.
I-ConceptD 7 Pro isungulwe ukusuka ngo-Novemba ngexabiso le-2.599 euros.
I-ConceptD 3 iya kufumaneka ukusuka nge-Okthobha ngexabiso le-1.199 euros.
I-Acer ConceptD 3 Pro iya kufumaneka ukusuka ngo-Novemba ngexabiso le-1.499 euros.
I-ConceptD 5 (17,3 ″) iya kufumaneka ukusuka ngo-Novemba ngexabiso lama-euro ayi-2.199.
I-ConceptD 5 Pro (17,3 ″) iya kufumaneka ngoDisemba ngexabiso le-2.599 euro.
I-Acer ConceptD 5 (15,6 ″) iya kufumaneka ukusuka ngo-Septemba ngexabiso le-1.999 euro.
IConceptD 5 Pro (15,6 ″) iya kufumaneka ukusuka nge-Okthobha ngexabiso le-2.499 euros.
Imonitha yeConceptD CM2241W iya kufumaneka ngo-Okthobha ngexabiso lama-euro angama-469.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » I-ConceptD: Uluhlu lweencwadana zeencwadana zeAcer